ကလေးနားပိုးဝင်ခြင်း- အကြောင်းရင်း၊လက္ခဏာများ၊ ကုသမှု - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » ကလေးနားပိုးဝင်ခြင်း- အကြောင်းရင်း၊လက္ခဏာများ၊ ကုသမှု
နား ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းတစ်ခုက ကလေးငယ်အများစုဟာ သူတို့အသက် သုံးနှစ်မပြည့်မီမှာ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ နားရောဂါပိုးဝင်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ခံစားရတဲ့အခါမှာ သင့်ကလေးငယ်ဟာ စိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အခြားသိသာ ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးဟာ နားရွက်ဆွဲခြင်း၊ ကိုင်ခြင်း
အနည်းငယ် (သို့) အဖျားအလွန်တက်ခြင်း။ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ ကလေးငယ် တုတ်ကွေးမိခြင်း၊ နှာခေါင်းနှင့် ဦးခေါင်းခွံကို ဆက်ထားသော လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် ပိုးဝင်ခြင်း ရအပြီးမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း – နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဟာ ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း – နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ အစာမျိုချစဉ်၊ ဝါးစဉ်တွေမှာ နာကျင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
နားမှ အဝါရောင် အဖြူရောင် အရည်ဆင်းခြင်း – ဒါဟာ သင့်ကလေးရဲ့ နားစည်အတွင်းမှာ အပေါက်ငယ် ဖြစ်ပေါ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနံ့ နံခြင်း – သင့်ကလေးရဲ့ နားကနေ ဆိုးသောအနံ့ထွက်ခြင်း
အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်း – လဲလျောင်းခြင်းဟာ ကလေးငယ်ကို နာကျင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ကို ဘာတွေက ဖြစ်ပေါ်စေလဲ။
သင့်ကလေးငယ်ဟာ အအေးမိခြင်း၊ နှာခေါင်းနှင့် ဦးခေါင်းခွံကို ဆက်သွယ်ထားသော လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် ပိုးဝင်ခြင်း (သို့) ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်အပြီးမှာ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ နားအလည်ပိုင်း နဲ့ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းတွေကို ဆက်ထားတဲ့ Eustachian tube ပြွန်ဟာ ပိတ်သွားစေပါတယ်။ ထိုသို့ပိတ်သွားလျှင် ဒီနေရာကို ရောက်လာတဲ့ အရည်တွေကို အကုန်လုံးကို ပိတ်မိနေစေပြီး ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
သုတေသီတွေက ကလေးငယ်တွေနဲ့ မွေးကင်းစကလေးတွေဟာ ချိုလိမ်ကို အသုံးပြုရင် နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ပိုမို ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ချိုလိမ်အသုံးပြုတဲ့ကလေးတွေဟာ အသုံးမပြုတဲ့ ကလေးတွေထက် နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပွားနှုန်း ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သင့်ကလေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်နှုန်းဟာ ပိုမို လျော့ကျလာပါတယ်။ Eustachian tubes ပြွန် တွေက သုံးဆပိုရှည်လာပြီး ပိုမတ်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရည်တွေကို နားစည်နောက်ဘက် နေရာမှာ ကပ်နေခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ ကုသမှုက ဘာလဲ။
သင့်ကလေးအခြေအနေ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်လဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ကုသမှုတွေမှာ စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ခြင်းတွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း အများစုဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ကောင်းနိုင်တာမို့ ရောဂါလက္ခဏာ မပြင်းထန်ရင် စောင့်ကြည့်ခြင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ နေထိုင်မကောင်းခြင်း ဆိုးရွားလာခဲ့ရင်တော့ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ကို တိုက်ဖို့ ပိုးသတ်ဆေး လိုနိုင်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေး အများအပြားသောက်ခြင်းဟာ ဆေးယဉ်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေတာကြောင့် ဆရာဝန်တွေက ပိုးသတ်ဆေးတွေကို ဂရုတစိုက်သောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးငယ်က အသက် ၆ လ အနည်းဆုံးရှိပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်က acetaminophen သို့ ibuprofen ကို နာကျင်မှု သက်သာစေဖို့ သောက်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီး သိသိသာသာ မသက်သာ ခဲ့ရင်ဆရာဝန်က ဆေးပြောင်းခြင်း၊ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ သင့်ကို နောက်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးဖို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသက် ၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေဟာ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ကို ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ဒီအခြေအနေဟာ လက္ခဏာ အနည်းငယ်နဲ့သာ လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကလေးရဲ့ စိတ်အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုကို သတိထားမိပြီဆိုရင် ကလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓါကို သေချာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ကလေးမှာ တစ်ခုခု ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ပြီဆိုရင် ဆေးကုသမှုယူဖို့ နှောင့်နှေးခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 11, 2017
Ear infections in babies. http://www.babycenter.com/0_ear-infections-in-babies_83.bc. Access December 24, 2016